ढोरबराह मन्दिरमा ६ सय बढी भेडाको बलि चढ्यो : सडकको दुर्दशाले ढोरपाटन पुग्न कठिन ! – ebaglung.com
ढोरबराह मन्दिरमा ६ सय बढी भेडाको बलि चढ्यो : सडकको दुर्दशाले ढोरपाटन पुग्न कठिन !
२०७६ श्रावण ३०, बिहीबार १६:१३	Footer Slider, Home Slider, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
छविलाल पाण्डे, बुर्तिबाङ २०७६ साउन ३० । बागलुङको प्रशिद्ध धार्मिक स्थल ढोरबराह मन्दिरमा जनैपुर्णिमा पर्वको अवसरमा सयौँ दर्शनार्थीले मन्दिरको दर्शन सँगै पुजा आर्चना गरेका छन् ।
ढोरबराह मन्दिरमा दर्शन तथा पुजा पाठ गरेमा मनोआकाङक्षा पुरा हुने जनविश्वासका कारण बागलुङ जिल्ला सहित गुल्मी, प्युठान, रुकुम, रोल्पा, म्याग्दि, पाल्पा, गुल्मी, बुटवल काठमाडौ लगाएत देशका विभिन्न स्थानबाट आएका दर्शनार्थीले मन्दिरको दर्शन सँगै सयौँ भेँडाको बलि चढाएका हुन् । मन्दिर व्यवस्थापन समितीका अनुसार बिहान ४ बजेदेखि दर्शनाथीहरुलाई लाइनमा लगाएर पुजा पाठ गर्न दिइएको हो ।
बिहान देखि सुरु गरिएको पुजापाठमा ढोरबराह मन्दिरमा अहिले सम्ममा मात्रै ५ सय ४२ र उक्त मन्दिर नजिकै रहेको सुल्ठान मन्दिरमा करिब ८० गरी ६ सय २२ भन्दा बढि भेँडाको बलि दिइएको बताइएको छ । त्यस्तै सयौँ भेँडा आजकै दिनमा पुजा गर्नका निम्ती खरिद गरेर विभिन्न स्थानमा पुर्याउने गरेको स्थानीय भेडा ब्यापारी भिमप्रसाद अदैले बताए ।
उर्लियो भेँडाको मूल्य
दुईचार बर्ष पहिले ५÷६ हजार रुपैयाँ पर्ने भेडाको मुल्य बढेर पछिल्लो समय रु १० हजार देखि १५ हजार रुपैयाँ सम्ममा विक्री हुने गरेको व्यबसायीहरुको भनाई छ । युवा पुस्ताले भेडाबाख्रा पालन तर्फ आकर्षित हुन छोडेपछी भेँडा पाइन छोडेको र मुल्य समेत आकासिएको भेडा व्यापारी ज्ञान बहादुर अदैको भनाई छ ।
जो कोहि पुग्न सक्दैनन ढोरपाटन
ढोरबराह मन्दिरमा बैसाखे पुर्णिमा र बर्खे अर्थात जनै पुर्णिमामा बिशेष गरी पुजा हुने गर्दछ । बर्षातको समय भएका कारण जनैपुर्णिमा दर्शन गर्न जानेहरुका लागि सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम रहेको छ । खान र बस्नको व्यवस्थापन क्रमश सुधार हुँदै गएपनी यात्रा गर्ने यात्रुहरुलाई बढि समस्या छ । बुर्तिबाङ–ढोरपाटन दुरीको हिसावबले जम्मा ३६ किलोमिटर हो तर पुगेको वा फर्किएको एकोहोरो भाडा जिपमा १ हजार देखि ११ सय रुपैयाँ सम्म यात्रुले तिर्न बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा सामान्य खर्च लिएर ढोरपाटन जानखोज्ने यात्रुलाई सवारी भाडाकै पिरलो बढि भएका कारण ढोरपाटन पुग्न कठिन हुने देखिन्छ ।
ढोरपाटनमा सडक सञ्जाल जोडिएको एक दशक पुग्न लागिसकेको छ तर सडक व्यवस्थापनमा नत सालझण्डी ढोरपाटन सडक आयोजनाको नजर पुगेको छ नत सिँहदरबारको रुपमा परिचित स्थानीय सरकारको ! सडक खाल्डा, खुल्डी र हिलाम्मे भएका कारण सहज रुपले यात्रा गर्न समस्या हुने गरेको छ ।
बुर्तिबाङ देखि ढोरपाटन जिप वा मोटरसाइकलमा पुग्नकै लागि करिब ४ घण्टा समय लाग्ने गरेको छ । ढोरपाटन सम्म यतिबेला बस, ट्याक्सि पुग्दैनन् । जिप मोटरसाइकल समेत बढो रिक्स मोलेर लग्नुपर्ने बाध्यता चालकमा छ । यसरी प्रत्यक बर्ष यात्रुले खेप्नुपर्ने सास्ती तर्फ सम्बन्धीत निकायको चाँडो ध्यान पुग्न अति आवस्यक देखिन्छ ।
आजको तस्वीर : ढोरबराह मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तको भीड !